ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံး၊ တခြားတစ်ဦး လက်သုံးချောင်းပြတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံး၊ တခြားတစ်ဦး လက်သုံးချောင်းပြတ်
ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံး၊ တခြားတစ်ဦး လက်သုံးချောင်းပြတ်
Posted by ကြာဖြူ on Jun 12, 2011 in Myanma News, News | 10 comments
ပြည်သူ့ရင်ပြင် ၊ ရေလွှာဦးယျာဉ်တွင် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က ရေလွှာလျှောစီးရင်း လူငယ်တစ်ဦးသေဆုံးပြီး တခြားလူငယ်တစ်ဦး လက်သုံးချောင်းပြတ်သွားခဲ့ ကြောင့် သိရသည်။ သေဆုံးသူမှာ အမှတ် ၉၆၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း ၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် ၂၄ နှစ်အရွယ် မောင်ဖိုးခွားခွား (ခေါ်) မောင်စန်းထွန်းဝင်းဖြစ်သည် ဟုသိရသည်။
ယင်းနေ့ ညနေ လေးနာရီခန့်တွင်ပဲ ဝေဘာဂီမြို့နယ် နေ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မောင်တင်အောင်ဖြိုး ဆိူသူ လူငယ်တစ်ဦးလည်း ရေလွှာလျှောစီးရင်း လက်သုံးချောင်းပြတ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုများနှင့် သေဆုံးမှုအတွက် ကန်ထရိုက်ငှားရမ်းလိုပ်ပိုင် ခွင့်ရရှိထားသော Company က တစ်စုံတစ်ရာ တာဝန်ယူခြင်းမရှိကြောင်းလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သူ မောင်တင်အောင်ဖြိုးက ပြောကြားသည်။
ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ် တစ်စောင်မှ အယ်ဒီတာချူပ်တစ်ဦးကမှု အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွက် တာဝန်အရှိဆုံးမှာ ကန်ထရိုက်ငှားရမ်းပေးသူနဲ ကန်ထရိုက်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူတို့ဖြစ်ပြီး အပန်ဖြေလာရောက်သော ပြည်သူများအတွက် ဘေးကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
သေဆုံးသူ မှာ ဒန်အိုးစက်တွင် တရက် 2500 နှုန်းဖြင့် မိသားစုကိုလုပ်ကိုင် ကျွေးမွေးနေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် Company ၀န်ထမ်းမှ ရက်လည်နေတွင်လာခဲ့ ပါအုံမယ် ဆိုပြီး ငွေ ၁သိန်း ပေးလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
View all posts by ကြာဖြူ →
ကန်ထရိုက်ဆွဲထားတဲ့ Company မှာလုံးဝ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခုလို အဖြစ်မျိုး နောက်မကြုံရအောင် ဘေးကင်းအောင် လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဂျာနယ်ထဲမှာတောင်ပါပြီးသွားပြီလေ ညီမရဲ. သတင်းထူးလေးတွေတင်စေချင်ပါတယ်……..
Ta yar swel bar lar? Sayar won gye dwe ko swel tha lo.
ရေလွှာလျောစီးရင်း ဘာကြောင့်လက်ပြတ်ရတာလဲ။ ဘာကြောင့်သေရတာလဲ ။ နှစ်ယောက်တောင်ဖြစ်တာဆိုတော့ တခုခုပဲ ။ သိရင်ပြောပြပေးပါလား။ဘာဖြစ်လို့ လက်ပြတ်တာလဲရယ်။ ဘာကြောင့်သေသွားရတာလဲရယ်ကို ။ အပေါ်က ပိုစ့်မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပါလို့။
ဒီလောက် အန္တရာယ်များတာကို လုံခြုံအောင် လုပ်ထားသင့်တာပေါ့။ ဘယ်လိုကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တာတွေကိုလည်း သေသေချာချာ ပြောပြပေးရင် ပိုကောင်းမယ်နော်။ သွားတဲ့သူတွေ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်တာပေါ့။ မနောတော့ ဖွင့်ပြီးထဲက တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး။
ရွာ ထဲ ၀င်ရေးတဲ့ ပထမဆုံးပို့စ်က ကော်ပီဖြစ်နေတာ တညိုးကြီးပဲ
copy/paste ဆိုတာကို ရွေးပေးလျှင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်…။
လက်ပြတ်သွားတာကို မောင်တင်အောင်ဖြိုးပြောခဲ့တာက ရေလွှာစီးရင် အမြင့် ပေ20 ပေ 30လောက်မှာ အရှိန်များသွားတယ်လို့ သိလိုက်တော့ ရေလွှာရဲ့ ဘေးနံရံဘောင်ကို ကိုင်လိုက်တယ်တဲ့။ အဲမှာ ရေလွှာရဲ့ သံပြားတွေက ဟနေတယ်တဲ့။ ဟနေတဲ့ သံပြားကြားထဲကို လက်ဝင်သွားတယ်တဲ့။ လက်သုံးချောင်းပါ လက်ခလယ်။ လက်ညှိုး၊ လက်သူကြွယ် တစ်ဆစ်ကျော်လောက်က ပြတ်သွားပါတယ်တဲ့။
သေတဲ့ လူကလည်း သေတဲ့ လူမိုလို့ပေါ့လေ.. လက်၃ချောင်း ပြတ်သွားတဲ့ ကောင်လေးက အသက် ၂၁နှစ်ဆိုလားပဲ.. လက်ပြတ်သွားတဲ့ အတွက် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ တော်တော် ထိခိုက်နိုင်တယ်။ သန်မြန်လွန်းတဲ့ လူငယ်ဆိုတော့.. အဲဒီ ဒဏ်ကို တော်တော် ခံစားရနိုင်တယ်။ သနားပါတယ်။